Naya course » बेरुत विस्फोट : कति खतरनाक हुन्छ ‘अमोनियम नाइट्रेट’ ? बेरुत विस्फोट : कति खतरनाक हुन्छ ‘अमोनियम नाइट्रेट’ ? – Naya course
एजेन्सी/लेबनानको राजधानी बेरुतमा भएको विशाल विस्फोटनबारे अहिले तीव्र अनुसन्धान भइरहेको छ । विस्फोटमा कम्तिमा १३७ को मृत्यु, पाँच हजार बढी घाइते अनि तीनलाख भन्दा बढी नागरिकहरु घरविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । यसमा राष्ट्रपति माइकल अओनले असुरक्षित रुपमा स्टोर गरि राखिएको केमिकल ‘अमोनियम नाइट्रेट’ का कारण यो दुर्घटना भएको बताएका छन् ।
जस्तै अष्ट्रेलियाको क्वीन्स ल्यान्डस्थित २०१४ मा भएको एक दुर्घटनामा अमोनियम नाइट्रेट बोकेको ट्रक पल्टिदा एउटा पूरै पुल नष्ट भएको थियो । यो केमिकल विश्वमा सबैभन्दा बढी रुसले उत्पादन गर्ने गरेको छ । र बेरुत घटनामा स्टक गरि राखिएको अमोनियम नाइट्रेट पनि रुसी कन्टेनरमै भएको खबर गरिएको छ ।